Thwebula DivX 10.3.1 – Vessoft
Isiqophi converters, Abadlali Media, Codecs
DivX – a iphakethe software ukudlala, amarekhodi kanye ukuguqula video files. Isofthiwe kuhlanganisa umdlali eyenza ukuba alobe futhi ukudlala eliphezulu video in ngetakhiwo letehlukene. DivX kuhlanganisa iphakethe yekhodekhi ukubuka ividiyo amafayela in MKV noma DivX takhiwo in abadlali ehlukahlukene. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukuguqula amavidiyo in ngetakhiwo letehlukene noma kukhishwe amathrekhi audio kusuka video files. DivX futhi baxhumana iziphequluli popular futhi kwenza ukudlala ividiyo yokusakaza in high.
Ukusekela ethandwayo ifomethi
Play of yokusakaza video
Abaguquka video files
Amazwana on DivX:
DivX Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... Any Video Converter 6.0.7 Ultimate futhi Professional
English, Українська, Français, Deutsch... FastStone Image Viewer 6.1
English, Afrikaans, Українська, Français... Driver Booster 4.2